Plaxo Desktop Notifier - Cusbooneysiinta Shabakadaada | Martech Zone
Plaxo Desktop Notifier - Cusbooneysiinta Shabakadaada
Wednesday, April 23, 2008 Axad, Oktoobar 4, 2015 Douglas Karr
Plaxo waxay aalad aan caadi aheyn u caawisay waqti in yar oo si fudud ayey u sii fiicnaaneysaa. Dhowr usbuuc ka hor, waxaan ku dhajiyay taleefankayga gacanta albaabka gaariga. Waxay ahayd wax aad u fiican, oo u kala qaybinaya taleefanka 2 qaybo jir ah. Waxaan helay taleefan cusub (had iyo jeer hel caymis!) Maalintii ku xigtay laakiin waxaan waayey buugga cinwaanka.
Waxaan baaritaan deg deg ah ku sameeyay Codsiyada Verizon waxaanan ogaaday inay haysteen Plaxo oo iyaga ka mid ah. Waan rakibey haddana waxaan awood u leeyahay inaan taleefankayga la waafajiyo Plaxo xiriirada aan doorto. Waxay ii keydisay bilooyin aan ka jawaabo wicitaanada anigoon ogeyn cida kale geeskeeda.
Haatan waxaa imanaya ogeysiiska Plaxo Desktop
Marka dadka aan ku xirnahay twitter, ay u diraan boggooda, ama ay sameeyaan dhowr isbeddello kale, waxaan helayaa ogeysiis desktop ah. Tan iyo markii aan auto-raac on Twitter, Labaatan mashquul badan ayuu ku jiraa runtiina waxaan u xiisay fariimo qaar ka mid ah dadka gudaha ku jira shabakadayda.
In kasta oo aan ku leeyahay tiro xiriir ah LinkedIn, haddana taas waan helay Plaxo waa wax badan oo hanti ii ah aniga maxaa yeelay waxay haysaa dhammaan buugaaggayga cinwaanada (iyo taleefankayga) oo la isku daray. Dhib malahan in aan bixiyo adeegga, sidoo kale. Qaybta maskaxda ee ogsoonow in kombiyuutarradayda ama taleefankayga midkood la waayi karo oo aan weli haysto buuggayga cinwaanku waa maskax maskaxda ku haysa in la bixiyo!
Tags: wac talaabowicitaan ficilisku xidhanwadashaqeynlooxyada iskudhafkasaamayn graphefLewis howes
Warbaahinta Bulshadu waxay ku saabsan tahay fulinta